Accueil > Gazetin'ny nosy > 4.047 tapitrisa dôlara: Nataon’ny fitondrana Hvm aiza ?
4.047 tapitrisa dôlara: Nataon’ny fitondrana Hvm aiza ?
Teboka iray ifandrozanan’ny mpitondra fanjakana sy ny mpanohitra mitovy tarigetra aminy ity resaka hoe « itokisan’ny mpampisambo-bola iraisam-pirenena » na « toavin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena » ity. Ny fahazoana vola samborina na zanahina avy amin’izy ireo moa no mari-drefy itarafan’izay ireny izany. Raha manome vola hosamborintsika malagasy amin’ny alalan’ny mpitondra fanjakana eto ny mpampisambo-bola iraisam-pirenena dia mirehareha aoka izany fa « itokisan’ny any ivelany ».
Tsy hojerentsika ny tetika maloton’ny mpampisambo-bola amin’izany fa ny farafahakelin’ny ady hevitra tsy azo hamaivanina dia izao : na iza na iza mpampisambo-bola, na firenena ampisamborina na orin’asa, na tokantrano iray na olom-pirenena iray, dia ny antoka hahafahan’ilay misambotra an’iny vola iny manonitra azy no ifotorany. Izany hoe ny mpampisambotra dia tsy manome vola anao raha tsy fantany fa ho afaka manonitra na mandoa an’iny vola nosamborinao iny ianao. Misy mihitsy aza moa ny oha-pitenenana iray izay manao hoe « tsy mampisambotra afa-tsy amin’ny olona manana ».
Tsy misy valaka amin’izany ny fifampisamboram-bola eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy ny fitokisan’ny mpampisambotra ny mpitondra loatra no tena ifotoran’ny fanekeny hgampisambotra fa ny fahafantarany fa misy antoka ahafahany maka ankolaka ny volany ao. Isika Malagasy izany dia tafiditra tanteraka ao anatin’izay teti-panorona izay satria fantatr’izao tontolo izao ny harembe eto, ary efa manomboka misitraka izany hatry ny ela ange ireo mpampisambo-bola iraisam-pirenena ireo e ! Ny Vondrona Eraopeanina, ohatra, dia miliba amin’ny hazandranomasintsika Malagasy. Ny sasany miafina any andamosin’ireo tetik’asa lehibe momba ny harena ankibon’ny tany. Ny sasany mody any amin’ny tontolo iainana no itondrany ny volany fa efa misy hitany fa hahazoany mamerina ny volany any aminy ao, sy ny maro tsy ho voatanisa e !
Amin’izao fotoana dia mizahozaho ny fitondrana Hvm fa « ny 60%-n’ny tonom-bola nambaran’ireo mpampisambo-bola an’i Madagasikara tany Parisy tamin’ny fiandohan’ny taona 2016, izay misanda 6.380 tapitrisa dôlara mandritra ny efa-taona no efa voarain’i Madagasikara ». « Ara-tarehi-marika mivantana dia efa nahatratra 4.047 tapitrisa dôlara tamin’io no azontsika », hoy ny minisitry ny Vola, Vonintsalama Andriambololona.
Dia hoy ny mpitazana hoe « nataon’ny fitondrana Hvm aiza izany volabe izany fa toa ny fahantran’ny Malagasy aza no mitombo, ny fahapotehan’ny toekarem-pirenena tsy mbola misy tokontaniny izay fanarenana azy, ny fotodrafitrasa isan-karazany eto, tsy misy mpijery, ny fahasalamam-bahoaka toa mahakivy fa sanatria hanara-dia ny maty tsy ho ela avokoa raha sendran’ny aretina ; sy ny maro tsy ho voatanisa e ! »
Ka inona moa izany fa tsy manara-davahana ny zava-nisy hatrizay ihany ny fitondrana Hvm ? 5.000 tapitrisa dôlara ny fitambaramben’ny trosan’olona tamin’i Madagasikara tamin’ny Repoblika faharoa fa niarahantsika nahita ny vokany fa vao mainka fahantrana. Nirehareha Ravalomanana tamin’ny fitantanany fa nahazo eo amin’ny 6.000 tapitrisa dôlara teo koa. Nankaiza koa ny nihafaran’ny vahoaka malagasy. Tonga izao ny fitondrana Rajaonarimampianina dia hoe « efa nahazo 4.047 tapitrisa dôlara ». Natao aiza koa io fa ny harem-pirenentsika ange ka mihazakazaka ny fandroban’ny sasany azy nefa ny vola azo avy any ivelany tsy hita voaka ny nampiasana azy ho an’ny vahoaka e !